तालिबानले सत्ता कब्जा गरिरहँदा किन मौन रह्यो अफगान सेना ? बल्ल खुल्यो यस्तो भित्रि रहस्य — Sanchar Kendra
तालिबानले सत्ता कब्जा गरिरहँदा किन मौन रह्यो अफगान सेना ? बल्ल खुल्यो यस्तो भित्रि रहस्य
काठमाडौँ । ५ अगस्टमा जब तालिबानी विद्रोही अफगानिस्तानको राजधानी काबुल छिर्न थाले, राष्ट्रपति असरफ घानीले देश नै छाडेर भागे । केही रिपोर्टका अनुसार उनी ताजिकिस्तान पुगे भनिएको छ । कसैले उज्वेकिस्तान पुगेको दावी गरेका छन् ।
डेनमार्क, नर्वे, स्वीडेन, जर्मनी, अमेरिका लगायत धेरै देशले काबुलबाट आफ्ना दूतावास फिर्ता गर्न थालेका छन् । आम नागरिकका लागि भने काबुल विमानस्थल एकै ठाउँ बाँकी थियो । जहाँबाट मानिसहरु विदेश भाग्न सक्थे । तर अहिले त्यो ठाउँ पनि सर्वसाधारणका लागि बन्द गरिएको छ ।
बाइडेनले केहीअघि मात्रै कुनै हालतमा तालिबानले नजित्ने दावी गरेका थिए । तर अमेरिकी जासूसीका अनुसार २ देखि ४ महिनाभित्रै तालिबानले सत्ता कब्जा गर्नेछ भनिएको थियो । त्यसको केही सातामै अगस्टमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरिदियो ।
तर पनि अफगान सेनाले तालिबानविरुद्ध कुनै जवाफी हमला वा प्रतिक्रिया केही किन दिन सकेन वा चाहेन ? तालिबान राजधानी काबुल छिरिरहँदा के त्यहाँ सेनाको उपस्थिति नै थिएन ?
अमेरिकामा डोनल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति छँदा अफगान सरकारले अमेरिकामा गएर शान्ति वार्तामा हस्ताक्षर गरेको थियो । जुन कुरा अफगान सेनाका लागि एक गम्भीर धोका थियो । लज्जाको विषय थियो । आफ्नो देशको सेना हुँदाहुँदै विदेशीको भूमिमा गएर आफ्नै सरकारले पीठ पछाडिबाट लात हानेर सेनाको वास्ता नगरिकन वार्ता गर्छ भने त्यो गम्भीर धोका हो भन्ने धारण अफगान सेनाको थियो ।
सेनाले भनेको थियो कि, हाम्रो दुश्मनसँग हाम्रै पछाडि गएर वार्ता गरेर हस्ताक्षर गर्नसक्ने सरकार विदेशीका लागि काम गरेको छ । अर्को कारण थियो कि, जब अमेरिकी जो बाइडेन सरकारले अमेरिकी सेनालाई फिर्ता लैजान थाल्यो, यो त अफगान सेनाका लागि झनै हिनताबोध गराउने लज्जास्पद घटना थियो ।
अफगान सेनालाई लाग्यो कि, अब तालिबानसँग कसरी भीडन्त गर्न सकिएला र ? खासमा तालिबानसँग लड्नुपर्ने बेलामा अमेरिकी सेना फिर्ता गइदिँदा अफगान सेना थप चिढिएको थियो । त्यसो त, त्यसअघि नै राष्ट्रपति घानी अमेरिका पुगेर सेना फिर्ताको निर्णय गरेका थिए । जवकि, त्यस निर्णयको विरोध सेना सहित धेरैले गरेका थिए ।
यदी ९/११ का दुश्मनविरुद्ध मात्रै यो मिसन थियो भने २०११ म ओसामा बिन लादेनको ह’त्यापछि पनि अमेरिका किन अफगानिस्तानमा बसिरह्यो त ? यो प्रश्न चाहिँ उठिरहेको छ ।
२०१९ को अनुसन्धानले के देखाउँछ भने अमेरिकाले ९/११ हमलापछि मध्यपूर्वमा युद्धमा मात्रै ६ दशमलब ४ ट्रिलियन डलर खर्च गर्यो । र ८ लाख मानिस मारिसकेका थिए । र यो सबै अमेरिकी करदाताले संकलन गरेको पैसा थियो ।
त्यस्तै तालिबानले अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई अफगानिस्तानमा आफ्नो सरकारलाई मान्यता दिन अपील गरेको छ । चिनियाँ सञ्चारमाध्यम सीजीटीएन टीभिलाई अन्तर्वार्ता दिँदै तालिबानका प्रवक्ता सुहेल शहीनले अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई तालिबानी सरकार स्वीकार गर्न अपील गरेका हुन् ।
शहीनलले “अफगानी जनाताको इच्छाको सम्मान” गर्दै तालिबानी शासनलाई स्वीकार गर्नुपर्ने जनाएका हुन् । शहीनले तालिबानी शासनमा अफगान महिलाबारे व्यक्त गरिएका चिन्ता निराधार भएको बताए ।
तालिबानी सरकार महिलालाई पढ्ने, लेख्ने र काम गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले जनाएका छन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक संस्थामा नयाँ सरकारका लागि ‘फण्ड रिलिज’ गर्न आग्रह पनि गरेका छन् ।